4 Incredible Microsoft Training Courses & Certification - NY FAMPIANARANA
1. Fampiofanana Microsoft Excel 2013 Training
2. Ny Microsoft Active Directory dia mitandrina amin'ny windows server 2012R2
3. Fampidirana amin'ny Microsoft Office 365
Office 365 ho an'ny IT Pros
Manomboka amin'ny Office 365
Fandefasana ny birao 365
4. Fampahafantarana sy fandaminana ny Microsoft SCOM 2012
Ity fampiofanana Microsoft Excel 2013 Advanced ity dia natao hanatsarana ny fahaiza-manao ilaina hampiasana latabatra rotaka, famerenana mialoha ny famoahana ny asa, famoahana fitaovana informatika, ekipa miaraka amin'ny hafa, ary manamboatra sy manara-maso ny macros.
Ity fandaharam-potoana ity dia nomanina ho an'ireo tsiambaratelo izay manana ny fahaiza-miaina miaraka amin'ny Microsoft Excel 2013 izay mila mandray andraikitra sy fahatakarana maromaro kokoa izay mila hiditra ao anatin'ireo laha-tsoratra amin'ny andavanandro ao amin'ny interface 2013.
Aorian'ny famaranana ity dingana ity, ny fahatarana dia hanana fahafahana:
Manaova latabatra boribory sy diagram.
Araho ny hevitra sy ny paroasy.
Hanova ny votoaty ary ankatoavina sy hanamafisana ny vaovao.
Ny ekipa miaraka amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny famenoana asa vita sy ny boky fampiharana.
Manaova, ampiasaina, manova ary manara-maso ny macros.
Fampidirana sy famandrihana vaovao.
Mitadiava toro-lalana ary araho amin'ny fanaraha-maso ny Active Directory fandrosoana amin'ny Windows Server 2012 sy Windows Server 2012 R2 amin'ity sehatra Microsoft Offline 5 andro ity. Horaisina amin'ny fahaizanao ny manara-maso tsara sy manome antoka ny fampahalalana sy ny angona, mamolavola ny fikambanana sy ny fitantanana ny foto-drafitr'asa, ary manome safidy azo antoka kokoa amin'ny fampahalalana. Hianatra ny fomba fandaminana ny ampahany amin'ireo singa fototra ao amin'ny Active Directory, ohatra ny Active Directory Domains (AD DS), Politique Group, Dynamic Access Control (DAC), Toeram-piasana miasa, Toeram-piasana Miaraka, Sertifika Services, Management Services (RMS), Services Services, ary ny fandrindrana anao amin'ny fampidirana ny tontolo iainana miaraka amin'ny fanavaozana rahateo, ohatra, Windows Azure Active Directory. Amin'ny lafiny lehibe amin'ny fianarana fototra, dia hanao asa an-tanana ianao ao amin'ny tontolo virtoaly virtoaly.
Ity andian-dahatsoratra ity dia andrasana ho an'ireo matihanina momba ny teknolojia momba ny teknolojia (IT) izay manana Active Directory Domain Services (AD DS) ary mikasa ny hanana sehatra tsy miankina izay hamorona koa ny fianarana sy ny fahaiza-manao mampiasa ny fitaovana Access Access sy ny Fiarovana amin'ny Windows Server 2012 sy Windows Server 2012 R2. Anisan'izany ny:
Adikao DS Administrators izay manantena ny hamorona asa fanampiny ao amin'ny Access and Information Protection vao haingana miaraka amin'ny Windows Server 2012 sy Windows Server 2012 R2.
Rafitra Framework na Infrastructures miaraka amin'ny AD DS sy ny fampahalalana ankapobeny izay mikendry ny hampivelatra io fahalalana fototra io ary hampiroboroboana tanteraka ny fandrosoana Active Directory amin'ny Windows Server 2012 sy Windows Server 2012 R2.
Mpitsikera IT izay nandray ny 10967A: Ny fototry ny fampianarana Windows Server Infrastructure ary manantena ny hampivelatra ny vaovao momba ny rejisitra Active.
Manampy vahaolana azo itokisana ho an'ny fitantanana ny toetra amam-panahy ary manana ny fahafahana mamaha ny toe-javatra misy vahaolana mety.
Ampidiro ary adikao AD DS ao amin'ny Windows Server 2012.
Fandefasana AD DS.
Manaova AD DS any an-toerana, mandamina ary manara-maso ny replication
Manatanteraka sy manara-maso ny politikan'ny Vondrona
Amboarina amin'ny fikirakirana ny client amin'ny politika
Manaova fepetra fanamafisana ny fahefana (CA) baiko amin'ny AD CS sy ny fomba hanaraha-maso ny CA.
Manatanteraka, mandidy sy manara-maso ny fanambarana.
Manatanteraka sy manara-maso AD RMS.
Manaova sy mandamina AD FS.
Ny fampidirana fiarovana sy fandaharam-potoana dia mampiasa ny fandrosoana, ohatra, ny Dynamic Access Control, ny asa fanalahidy sy ny toeram-piasana
Screen, famotopotorana ary fametrahana fiaraha-miasa eo amin'ny fitantanana AD DS.
Hamarino ny Windows Azure Active Directory.
Mamaritra sy mandamina ny sari-tany Directory Directory Active Directory (AD LDS).
Ny Office 365 Fundamentals dia mijery ireo efamira fanorenana ny Office 365 ary ny ampahany amin'ny fampiroboroboana ny IT Professionals. Ny Microsoft Office 365 dia singa iray amin'ny fitantanana rahona sy ny fampiasana ny fampiasana farany farany. Ny fanombohana dia manomboka amin'ny famakafakana ny Office 365 engineering amin'ny planina amin'ny IT Professional, avy eo dia mametraka ny fahatarana amin'ny alàlan'ny fampitaovana Office 365 ary mameno ny fanovana ny fampiharana sy ny fitantanana.
Ny Office 365 dia manolotra ireo fahaiza-manao izay angatahin'ny mpanjifany ary mamela ny IT mba hitazonana azy. Na izany aza, ny fiovana dia mitaky ny IT Pros mba hanitsiana ny fahaizan'ny mpizara mpanjifa ho an'ny fizarana fizarana fizarana. Amin'ity lalana ity, hahafantatra ny fomba amam-pitaovana vaovao ao amin'ny Office 365 ny IT Pros, hahafantarana ireo fitaovana vaovao sy fepetra hivezivezy any amin'ny Office 365, ary hanomana ny ampahany miasa amin'ny IT Pros.
Ity Birao 365 ity dia tena ilaina amin'ny fianarana manara-maso ireo manam-pahaizana IT izay manana foibe ao amin'ny Office 365 izay manome hery ny haavom-pitantanana sy ny fahatanterahan'ny fahaiza-manao.
Ity fotoam-pivoriana ity dia mampiseho ny fahalianan'i Microsoft ny fomba fandefasana alefan'ny Microsoft 365. Ny fampitaovana ny fitantanana rahona dia tsy toy ny mpandrindra mpanjifa mahazatra mandroso ary mitaky fahaiza-manao sy fomba vaovao. Miaraka amin'ny Office 365, ny birao foibe IT dia afaka mihazakazaka mihazakazaka miaraka amin'ny mpanamory fiaramanidina ary mandroso mankany amin'ny taranaka miaraka amin'ny fepetra ilaina amin'ny fahaiza-manao. Fantaro ny fizotran'ny fandefasana, ny fitaovana sy ny asa natao hanatsarana ny fanombohan'ny Office 365 traikefa.
Ity Office 365 essentials ity dia mahaliana ny safidy sy ny fandinihina raha toa ka mitombo ny tontolo iainana Office 365 mpanara-maso ao anatin'ny fandaharam-potoana iray.
Ity fotoam-bavaka ity dia mifantoka amin'ny rindem-piom-bahoakan'ny serivisy 365 Service Communications. Amin'ny maha-tombontsoa azy amin'ny fomba mahazatra, ny fampirimana ny fifandraisana anelanelan'ny IT manam-pahaizana sy ny vondrona Office 365 dia fototra. Asehoy ny fomba amam-panavaozana ny Administratiora Office 365, ny fanavaozana, ny fametrahana fanohanana, ary ny fitantanana ny fitantanana ary ny fomba hifandraisana amin'i Microsoft.
Ity fivoriana fianarana 365 tena ilaina ity dia mampiseho ny fomba fiasan'ny Microsoft sy ny fomba hanaraha-maso ny fanovana ao amin'ny birao sy ny fampiharana Office 365 ao amin'ny manodidina anao.
Ity fianarana dimy andro ity dia manome fahatakarana ny fianarana sy ny fahaiza-manao hampidirana sy hamolavola ny Systems Center 2012 Operations Manager. Ankoatra izany, ity sokajy ity dia hametraka ny fahatakarana amin'ny fanatanterahana ny foto-drafitr'asa 2012 Operations Manager.
Ity dingana ity dia nomanina ho an'ny manam-pahaizana IT miaraka amin'ny Windows Server, Active Directory ary rafitra fananganana sy fitantanana ny fitantanana.
Raha vao vita ny fandaharam-potoana, ny fahatarana dia hanana fahafahana:
Mampidira ny Operations Manager 2012 ary mandamina maneran-tany sy ny fitantanana manokan'ny manampahefana manokana.
Ampiasao rano fisotro madio ho an'ny fidirana avo.
Jereo ny Console Manager and Console Web.
Ataovy eo amin'ny sehatra fanaraha-maso ny ordinatera elektronika sy manamboatra.
Hiditra sy handefa kitapo fitantanana.
Manaova fitsipika, hetsika, drafitra ary asa.
Manamboara tatitra sy manao tatitra.
Fandefasana toeram-piofanana sy servetera ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso maso tsy misy maso sy tsy misy maso.
Mitandrema ary tandremo ny Fanaraha-maso ny Audit Collection.
Fahaizana manokana Multi-home.
Manamboara mpizara fitaratra mba hijerena ireo toe-javatra tsy mendrika.
Manomàna fifanintsana eo amin'ny bunches fitantanana.
Miafina amin'ny Operations Manager 2007 amin'ny 2012 Operations Manager.